IVangeli yoBukumkani bukaThixo – CCOG – Continuing Church of God Africa
Home › Xhosa › IVangeli yoBukumkani bukaThixo
IVangeli yoBukumkani bukaThixo
Posted on July 16, 2020 by ccogadmin
Kutheni le nto abantu bengakwazi ukuzicombulula iingxaki zabo?
Ngaba uyazi ukuba izinto zokuqala nezokugqibela iBhayibhile zibonisa ukuba uYesu wayezishumayele malunga neendaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo?
Ngaba uyazi ukuba uBukumkani bukaThixo yayigxininisa kubapostile nakwabo babalandelayo?
Ngaba uBukumkani bukaThixo bungumntu kaYesu? Ngaba uBukumkani bukaThixo uYesu buphila ubomi bakhe kuthi? Ngaba uBukumkani bukaThixo buhlobo oluthile lobukumkani bokwenene? Ngaba uyakukholelwa oko kufundiswa yiBhayibhile?
Buyintoni uBukumkani? Buyintoni uBukumkani bukaThixo? Ifundisa ntoni iBhayibhile? Yayifundisa ntoni icawa yamaKristu okuqala? Ngaba uyabona ukuba isiphelo asinakufika de uBukumkani bukaThixo bushunyayelwe emhlabeni njengengqina?
Link: IVangeli yoBukumkani bukaThixo
‹ Injil Karajaan Allah
Ihinrere ti ijọba Ọlọrun ›
Posted in Xhosa
© 2022 CCOG – Continuing Church of God Africa